သက်ဦး: အမ်စတာဒမ်၊ သည်ဟိဂ်နှင့် မီးအိမ်နီရပ်ကွက်
အမ်စတာဒမ်၊ သည်ဟိဂ်နှင့် မီးအိမ်နီရပ်ကွက်
တညလုံးခုတ်မောင်းလာသော ညရထားသည် အမ်စတာဒမ် ဘူတာကြီးသို့ အချိန်မှန်ဆိုက် ရောက်ပါသည်။ အမ်စတာဒမ်မရောက်ခင် ကိုလုံးဘူတာမှာ ခရီးသည်အတော်များများ ဆင်းသွားသဖြင့် ခြောက်ယောက်အိပ်ခန်းတွဲမှာ ကျနော်နှင့်ကိုတင်ထူး နှစ်ဦးသား ချောင်ချောင်ချိချိစီးလာခဲ့ရသည်။ ဘူတာမှာ လာကြိုသူ ကိုမြတ်သီဟနှင့်အတူ ကျနော်တို့တည်းခိုရန် စီစဉ်ထားသော ကိုဆန်နီအိမ်ကို ဘတ်စ်ကားဖြင့် လာခဲ့ကြသည်။ ဘတ်စ်ကားခမှာ ဇုံနှစ်ဇုံစီးရမည်ဖြစ်သောကြောင့် တယောက်စာအတွက် အတွဲလိုက် လက်မှတ်မှ သုံးကွက်ကို ကားမောင်းသူက တုံးထုပေးပါသည်။ လက်မှတ်တကွက်စာအတွက် ကျသင့်ငွေမှာ ယူရို ၀.၈ ဖြစ်ပြီး တဇုံစာခရီးသွားလျှင် အနည်းဆုံး ယူရို ၁.၆ ပေးရပါမည်။ နှစ်ဇုံကိုတော့ သုံးကွက်သာတုံးထု သဖြင့် ယူရို ၂.၄ သာပေးရသဖြင့် တခေါက်စာလက်မှတ်ဝယ်သည်ထက် ယူရို ၀.၈ သက်သာပါသည်။ လက်မှတ် အတွဲမှာ အတိုနှင့် အရှည် နှစ်မျိုးရောင်းသည်ဟု ကိုမြတ်သီဟက ရှင်းပြပါသည်။
တည်းခိုသည့် အိမ်မှာ ရေမိုးချိုး၍ ထမင်းစားကြပါသည်။ အိမ်ရှင် ကိုဆန်နီ အိမ်ရသည်မှာ မကြာသေး သဖြင့် အိမ်မှာ ဖုန်း၊ အင်တာနက်နှင့် တီဗီလိုင်းများ မတတ်ဆင်ရသေးပါ။ ထမင်းစားပြီး ဟိုဟိုဒီဒီ ကြည့်ရန် အမ်စတာဒမ် စင်ထရယ်ကို ကားပြန်စီးလာကြပါသည်။ ဘူတာကြီးရှေ့နားတွင် ဆိုင်တွေ၊ အဆောက်အဦတွေ၊ လူတွေနှင့် စည်ကားနေပါသည်။ လိင်မှုပြတိုက်ကို ၃ ယူရိုပေး၍ ၀င်ကြည့်ကြသည်။ ပန်းချီကားများ၊ အရုပ်များ၊ ရှေးဟောင်း လိင်မှုဆိုင်ရာ ဗီဒီယိုခွေများ ပြသထားပြီး တချို့သောပြကွက်များကို ကြည့်ကာ မိန်းခလေးများ တခွီးခွီးနှင့် ရီနေကြသည်။
ပြတိုက်မှအထွက် မိုးကရွာလာသဖြင့် လှည့်ပတ်ကြည့်ရှုခြင်းကို ရပ်နားကာ အိမ်ပြန်ကြဖို့ ဆုံးဖြတ်ကြ ပါသည်။ အိမ်မပြန်ခင် နာမည်ကျော် မီးအိမ်နီရပ်ကွက်အတွင်းမှ တရုတ်စားသောက်ဆိုင်မှာ သုံးယောက်သား တမင်းနှင့်ဟင်းများမှာစားကြပြီး ကျသင့်ငွေမှာ ယူရိုငါးဆယ် ဖြစ်လေသည်။
ယမန်နေ့ညက အိမ်ရှင်ကိုဆန်နီ ပြန်ရောက်လာပြီး မအိပ်ခင် စကားပြောကြသေးသည်။ ဒီမနက်အိပ်ရာ ထတော့ မနေ့ညက စကားဝိုင်းကို ဆက်ကြသည်။ ကိုဆန်နီက တရားဝင်နေထိုင်ခွင့်ရသည်မှာ မကြာသေး။ နယ်သာလန်ရောက်တာတော့ ဆယ်လလောက်ရှိပြီ။ ကိုဆန်နီ အသက် ၂၂ နှစ်မှာ ဂျပန်မှာ အလုပ်သွားလုပ် သည်။ လေးနှစ်အလုပ်လုပ်ပြီး ဖမ်းမိသွားကာ မြန်မာပြည်ပြန်ပို့ခံရသည်။ ရန်ကုန်မှာ တနှစ်လောက်နေပြီး ဂျပန်ကို နောက်တကြိမ်ပြန်သွားကာ အလုပ်လုပ်သည်။ လေးနှစ်အကြာမှာ ထပ်အဖမ်းခံရကာ မြန်မာပြည်ပြန် ရောက်သည်။ တတိယအကြိမ်ပြည်ပထွက်တော့ ဂျပန်ကိုမဟုတ်တော့ဘဲ ပွဲစားဖြင့် အမေရိကကို ၀င်ရန် ကြိုးစားသည်။ ပွဲစားစီစဉ်ပေးလိုက်သည့် ပတ်စ်ပို့အတုကို တောင်ကိုးရီးယားလေဆိပ်မှ လ၀ကများက ဖော်ထုတ်လိုက်နိုင်သဖြင့် အမေရိကန် အစီအစဉ်ပျက်သွားသည်။ တကြိမ်မအောင်မြင်လျှင် နောက်တကြိမ် ကြိုးစားခွင့်ရှိသည်ဟု ပွဲစားက ဆိုသည်။ ဒုတိယအကြိမ်မှာတော့ နယ်သာလန်ကို ရောက်လာခြင်းဖြစ်သည်။
ကိုဆန်နီပြောပြသည်များကို ကော်ဖီသောက် နားထောင်ရင်း အပြင်သွားကြဖို့ ကိုမြတ်သီဟက နှိုးဆော်သည်။ သူ့အစီအစဉ်အရ ဒီနေ့ ကမ္ဘာ့တရားရုံးရှိရာ သည်ဟိဂ် မြို့ကို သွားကြမည်။ အဲဒီမှာ ညအိပ်ကြ မည်ဖြစ်သည်။ အားလုံးအဆင်သင့်ဖြစ်တော့ ဘတ်စ်ကားဖြင့် အမ်စတာဒမ် စင်ထရယ်ကို ပြန်လာကြသည်။ ဘတ်စ်ကားပေါ်မှ ခရီးသည်များသည်လည်းကောင်း၊ လမ်းများပေါ်တွင်သွားလာနေသော လူများသည်လည်း ကောင်း ကျနော်တွေ့ရသည်မှာ ဒတ်ခ်ျလူဖြူများ မဟုတ်ကြ။ အညိုရောင်များ၊ အမဲရောင်များ၊ အ၀ါရောင်များကို တွေ့ရသည်သာများသည်။ ခေါင်းမြီးခြုံထားသူ အမျိုးသမီးအတော်များများကိုတွေ့တော့ `ဟ၊ ငါရောက်နေတာ ဟော်လန်မှ ဟုတ်ရဲ့လား။ တီဟီရန်များရောက်နေသလား´ အောက်မေ့ရသည်။ တကယ်တော့ အမ်စတာဒမ် သည် ကမ္ဘာအရပ်ရပ်မှ အခြေချနေထိုင်ရန် ပြောင်းရွေ့လာသူများဖြင့် မက်ထရိုပိုလီတန်မြို့ဖြစ်နေပုံရပြီး ဘတ်စ်ကားဒရိုင်ဘာများကလည်း အင်္ဂလိပ်စကားအတော်ပြောနိုင်ကြပါသည်။
အမ်စတာဒမ်မှာ သည်ဟိဂ်ကို အမြန်ရထား မိနစ်လေးဆယ်ခန့် စီးရပါသည်။ လက်မှတ်ခမှာ တဦးလျှင် ယူရို ၁၀။ ရထားလမ်းဝဲယာတွင် ရေသွင်းတူးမြောင်းများ၊ ပန်းစိုက်ခင်းများကို တွေ့ရသည်။ ဟော်လန်မှ ပြည်ပ ပို့ကုန်များတွင် ပန်းများလည်းပါသည်။ နွေရာသီပန်းတွေပွင့်ချိန်ဒီရထားကို ပြန်စီးလျှင် ရောင်စုံပန်းခင်းကို ဖြတ်သွားရသလိုဖြစ်နေလိမ့်မည်။ `ဟော်လန်နိုင်ငံသားတွေဟာ ရေကို ပြုပြင်ရာမှာ အထူးကျွမ်းကျင်တယ်၊ မကျွမ်းကျင်လို့လည်း မရဘူး။ အမ်စတာဒမ်မြို့ကြီးက ပင်လယ်ရေမျက်နှာပြင်ရဲ့အောက်မှာရှိနေတာ။ ပင်လယ်ရေတွေကိုသာ ထိန်းမထားနိုင်ရင် ရေအောက်ရောက်နေလိမ့်မယ်´ ဟု ကိုမြတ်သီဟ ရှင်းပြသည်။ တဆက်တည်းသူက `ကျနော်လည်း ဒီရောက်တာ ၇ နှစ်ရှိပြီ။ နော်ဝေးလေး ဘာလေး အဆင်ပြေရင် သွားလည်ချင်တယ်။ တောတွေ တောင်တွေ မြင်ချင်လို့ပါ။ ဒီနိုင်ငံမှာက တောင်မမြင်ရဘူးဗျ´ ဟုဆိုသည်။
သည်ဟိဂ်ဘူတာမှာ လာကြိုနေသူက ကျော်မိုးသူ။ သူ့အစီအစဉ်အရ Madurodam ဟုခေါ်သောနေရာကို ဓါတ်ရထားဖြင့်ရောက်သွားကြသည်။ ၀င်ကြေးငွေ ၁၃ ယူရိုပေးရသော ထိုနေရာတွင် နယ်သာလန်နိုင်ငံအတွင်း ရှိ အထင်ကရနေရာများဖြစ်သည့် ရဲတိုက်များ၊ နန်းတော်များ၊ ဆိပ်ကမ်းများ၊ အစိုးရရုံးဆိုက်ရာအဆောက်အဦး များ၊ လေယာဉ်ကွင်း စသည့်နေရာများကို တနေရာတည်းမှာ တွေ့ရအောင် ပုံစံတူဆောက်လုပ်ထားခြင်း ဖြစ်သည်။ လူငယ်များ၊ ခလေးများ အထူးစိတ်ဝင်စားမည့်နေရာတခု ဖြစ်သည်။
ထိုနေရာမှအပြန် နယ်သာလန်လွှတ်တော်ဘေးမှ ဖြတ်၍ တရုပ်တန်းသို့ရောက်ပြီး တရုတ်ဆိုင်မှာ စားကြသောက်ကြ၏။ စားသောက်ပြီး ကျော်မိုးသူတို့အိမ်ကို မသွားခင် ကမ္ဘာ့တရားရုံးကို သွားကြည့်ကြသည်။ တရားရုံးရှေ့မှာတော့ ဖလန်ဂေါင်ဂိုဏ်းသားတဦး တကိုယ်တော် ဆန္ဒပြနေသည်။
ထိုညက ကျော်မိုးသူတို့ညီအကို နေထိုင်ရာ တိုက်ခန်းတွင် ဂစ်တာတီး သီချင်းဆိုသူကဆို၊ ထမင်းဟင်း ချက်သူကချက်၊ ဟိုမေးသည်မေး လုပ်သူကလုပ်နှင့် အချိန်က ကုန်မှန်းမသိ။ ထိုမြို့တွင် ကျော်မိုးသူတို့ ညီအကို အပြင် ကိုမန်းခေါ် ချင်းလူငယ်တဦးလည်း နေထိုင်သည်။ ကိုမန်းဆီ လာလည်သူ ကချင်လူငယ် ဆန်းကြာ ကိုလည်း ထိုညက ကျော်မိုးသူတို့အခန်းတွင် ဆုံခဲ့ရပါသည်။
တတိယမြောက်နေ့တွင် ဥထရက်မြို့သို့ သွားလည်ကြမည်ဟု ကိုမြတ်သီဟ စီစဉ်ထားပါသည်။ လမ်းတွင် အမ်စတာဒမ် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ်ကို ၀င်ကြည့်ကြသည်။ နိုင်ငံတကာ အဆင့်မှီ ခေတ်မီလေဆိပ်ကြီး ဖြစ်သည်။ အမ်စတာဒမ်လေဆိပ်မှ တဆင့် အခြားဥရောပမြို့ကြီးများသို့ အမြန်ရထားဖြင့် ခရီးဆက်သွားလိုပါက အဆင်ပြေအောင်စီစဉ်ပေးထားသည်။ သို့သော် ရထားများအကြောင်း၊ ခရီးစဉ်အကြောင်း လက်ကမ်းစာစောင်ကိုတော့ ဒတ်ခ်ျဘာသာတခုတည်းဖြင့်သာတွေ့ရသည်။ လေဆိပ်မှ ဥထရက်သို့အသွားတွင် အမ်စတာဒမ်စင်ထရယ်ကို မ၀င်ရတော့ပါ။ နယ်သာလန်တွင် ရထားများဖြင့် ခရီးသွားရာတွင် အဆင်ပြေအောင် စီစဉ်ထားသည်ကို တွေ့ရပါသည်။ ဥထရက်ဘူတာတွင် မြန်မာပြည်သားဆွေမျိုးများကိုတွေ့ကြ၊ နှုတ်ဆက်စကား ပြောကြသေးသည်။ ပြီးတော့ ကိုဇော်ကြီး (ခေါ်) ကိုမျိုးဇော် နှင့် ကိုခင်မောင်အေး တို့စီစဉ်ထားသည့် နေရာကို ချီတက်ကြသည်။ ထိုနေရာကို ရထားတဘူတာ ထပ်စီးရသည်။ လမ်းက စူပါမားကပ်တခုမှာ စားစရာသောက် စရာတွေဝယ်ရသည်။ ထိုမြို့မှာနေသော လူများစုမှာ ဒေသခံဟော်လန်သားများ ဖြစ်ကြသည်။ ကိုမြတ်သီဟ၊ ကိုမျိုးဇော်နှင့် ကိုခင်မောင်အေးတို့မှာ နယ်သာလန်သို့ ရှေ့ဆင့်နောက်ဆင့် အတူရောက်သူများဖြစ်ကြသည်။ ကိုခင်မောင်အေးက ရှစ်ဆယ့်ရှစ်တုံးက ဆန္ဒပြခဲ့သည့် လေတပ်ရဲဘော်ဟောင်းတဦးဖြစ်သည်။ သူတို့အားလုံး နယ်စပ်ကျောင်းသားစခန်းများနှင့် မနီလွိုင်ကျောင်းသားစခန်းများကို ဖြတ်သန်းခဲ့ကြသူများဖြစ်သည်။ ယခု လက်ရှိလည်း နယ်သာလန်ရှိ မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီအရေး လှုပ်ရှားမှုများမှာတက်တက်ကြွကြွ ပါဝင်နေသူများ ဖြစ်လေတော့ သူတို့နှင့် စကားတွေ အများကြီး ပြောဖြစ်ကြသည်။ ကျနော်တို့ တည်းသည့် ကိုဆန်နီအိမ်အပြန် မှာတော့ ကိုခင်မောင်အေးက ကျနော်တို့နှင့် အတူလိုက်လာခဲ့သည်။
ဒီနေ့ညနေရထားဖြင့် ကျနော်တို့ပြန်ကြမည်ဆိုတော့ အိမ်ကထွက်ကတည်းက အ၀တ်အစားအိတ်များ တပါတည်း ယူလာခဲ့ရန် ကိုမြတ်သီဟက အကြံပေးသည်။ ဘူတာကြီးမှာ အိတ်တွေအပ်တော့ ကျသင့်ငွေ ၇ ယူရိုကို ခရက်ဒစ်ကပ်ဖြင့်ပေးရသဖြင့် လုံခြုံရေးအတွက်ပါ တပါတည်း စီစဉ်ထားပြီး ဖြစ်နေပုံရသည်။ ဒီနေ့ အစီအစဉ်အရ ဟော်လန်နိုင်ငံသားပန်းချီပညာရှင် ဗင့်ဆင့်ဗင်ဂိုး ပြတိုက်ကို သွားကြမည်ဖြစ်သည်။ အမှတ် (၅) ဓါတ်ရထားဖြင့် ဗင့်ဂိုးပြတိုက်ကိုရောက်တော့ လူတွေတန်းစီနေကြပြီ။ ၀င်ကြေးက ယူရို ၁၀။ အထဲမှာ လိုက်ကြည့်စဉ် ရှင်းပြတာကို နားထောင်နားကြပ်ဖုန်းလေးတွေအတွက် ၄ ယူရို ထပ်ပေးရသည်။ ဘာသာစကား ရွေးချယ်ရန် ပေးထားသည့် ဆယ်မျိုးခန့်တွင် ဂျပန်သာသာကိုလည်းတွေ့ရသည်။ ဗင့်ဂိုးပြတိုက်အသစ်ကို ဂျပန်က ဒီဇိုင်းထုတ်၍ ဆောက်လုပ်ပေးထားကြောင်း သိရသည်။ ပန်းချီကားများဘေးမှ ရှင်းပြထားသော ပိုစတာများတွင်တော့ ဒတ်ခ်ျဘာသာနှင့် အင်္ဂလိပ်ဘာသာနှစ်မျိုးသာ တွေ့ရသည်။ ပန်းချီကားနှင့်ပတ်သက်တာ ကို သိလိုလျှင် သူနှင့်သက်ဆိုင်သည့် နံပါတ်ကို နားကြပ်စက်တွင် နှိပ်လိုက်လျှင် အင်္ဂလိပ်လို ရှင်းပြပါသည်။ ပြတိုက်အတွင်း ကျနော်တို့ရှေ့မှ ရောက်နေသူများ၊ ကျနော်တို့နောက်မှ တဖွဲဖွဲဝင်လာနေသူများကို ကြည့်ကာ အသက် ၃၇ နှစ်အရွယ်မှာကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် အဆုံးစီရင်သွားခဲ့သည့် ပန်းချီကျော်ဗင်ဂိုးသည် နယ်သာလန် နိုင်ငံသားကောင်းပီသစွာ သူ့နိုင်ငံကို အလုပ်အကြွေးပြုပေသကားဟု တွေးနေမိပါသည်။ ပြတိုက်မှာ တနာရီ ကျော်နေပြီး၍ ကျနော်တို့ ပြန်ထွက်လာသည်အထိ နောက်ထပ်ဝင်လာသူတွေကို တန်းစီနေကြတုံးပါ။ နောက်ရက် နောက်ရက်တွေမှာလည်း ဒီလိုပဲ တန်းစီပြီး ဗင်ဂိုးရဲ့လက်ရာတွေကို လူတွေလာကြည့်နေကြလိမ့် အုံးမည်မှာ ဖြစ်လေတော့ ဗင်ဂိုးပြတိုက်ရယ် အမ်စတာဒမ်လေဆိပ်ရယ်က ရတဲ့ဝင်ငွေနဲ့တင် အမ်စတာဒမ်မြို့ သားတွေ ထိုင်စားနေလို့ရလောက်သည်။ `နှစ်စဉ်လွှတ်တော်မှာ ဘတ်ဂျက်ခွဲရင် တခြားပြည်နယ်တွေက ၀င်ငွေ ပိုကောင်းတဲ့ အမ်စတာဒမ်ကို အမြဲပဲ ဝေစုတောင်းလေ့ရှိတယ်´ ဟု အမ်စတာဒမ်မြို့သားကြီး ကိုမြတ်သီဟ က ရှင်းပြသည်။
ပြတိုက်မှ အထွက် နှင်းတွေကျလာသည်။ ဥရောပမှာ နွေဦးရာသီဝင်တော့မှာမို့ ဆောင်းကိုနှုတ်ဆက်သည့် နှင်းတွေပဲ ဖြစ်မည်။ စင်္ကာပူမှာလာသည့် အင်ဂျင်နီယာကိုတင်ထူးကတော့ ကျလာသည့်နှင်းတွေကို အမိအရ ဓါတ်ပုံရိုက်နေသည်။ သူ့အဖို့တော့ နှင်းဆိုတာ မြင်ရခဲသည့်အရာဖြစ်နေမည်။
ဒမ်စကွဲယားကိုရောက်တော့ နှင်းတွေကြားထဲကပဲ ဓါတ်ပုံရိုက်ကြသည်။ နေ့လည်စာကို ထိုင်းဆိုင်မှာစားသည်။ ကိုမြတ်သီဟ က ခေါက်ဖတ်၊ ကျန်သုံးယောက်က ဖတ်ကဖောင်ကိုင်၊ အအေးတခွက်စီသောက်ပြီး ပိုက်ဆံရှင်း တော့ ယူရို ၆၀ ကျသည်။ ကိုခင်မောင်အေးက ထိုနေ့လည်စာကို ဒကာခံသည်။ ကျနော်တို့ ဆိုင်ထဲဝင်လာတော့ ဆိုင်ရှင်အန်တီကြီးနဲ့ အလုပ်သမားတွေက ထိုင်းတွေဟု ထင်နေသည်။ ကျနော်တို့ ထိုင်းမဟုတ်မှန်းသိတော့ အမ်စတာဒမ်ကို လာလည်နိုင်တာ အတော်ချမ်းသာတဲ့မြန်မာတွေ ဖြစ်မယ်ဟု သူတို့ အချင်းချင်း ထိုင်းလို အတင်းချနေကြသည်။ အမ်စတာဒမ်က အစစအရာရာ ဈေးကြီးသည်ဆိုတော့ သူတို့ထင်မယ်ဆိုလည်း ထင်စရာ။ နောက်မှ ကိုမြတ်သီဟက သူအမ်စတာဒမ်မှာနေကြောင်း ပြောပြမိတ်ဆက်သည်။
စားသောက်ပြီးတော့ ဗိုက်တင်းတင်းရှိသည်နှင့် မီးအိမ်နီရပ်ကွက်ကို လမ်းလျှောက်ရင်း ပတ်ကြည့်ကြသည်။ အတော်ကြီးသည့် ရပ်ကွက်ကြီးဖြစ်ပြီး လိင်မှုဆိုင်ရာ စူပါမားကတ်၊ ရုပ်ရှင်ရုံ၊ လိုက်ဖ်ရှိုး (၀င်ကြေး ယူရို ၂၀ မှ ၂၅၊ တရုံနှင့်တရုံ ဈေးမတူ)၊ နှစ်ယူရိုပေး၍ ကြည့်ရသည့်နေရာ စသည်ဖြင့် စုံလှသည်။ ကော်ဖီဆိုင်တွေမှာတော့ ဆေးခြောက်ကို တရားဝင်ရှုနေကြသူတွေနှင့် ပြည့်ကျပ်နေသည်။ လမ်းလျှောက်ရင်း ညောင်းလာသည်နှင့် ဘူတာသို့ပြန်လာကာ ကော်ဖီသောက်ရင်း ရထားမထွက်ခင်အနားယူကြသည်။ လိုက်ပို့သူများနှင့် လမ်းမခွဲခင် ကိုခင်မောင်အေးက လာမည့်နွေရာသီမှာ သူဖင်လန်နိုင်ငံ ဟယ်ဆင်ကီးကိုသွားမည့်အကြောင်း၊ ဖင်လန်ရောက် တုံး စုစုနွေးစာသင်ကျောင်းကိုလည်း သွားရောက်လေ့လာမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ နယ်သာလန်မှာလည်း မြန်မာစာ သင်သည့်ကျောင်းလေး ဖြစ်လာအောင်တည်ထောင်ဖို့ ရည်ရွယ်ထားသည့်အကြောင်းများ ပြောပြနေပါသည်။
ရထားဝင်လာတော့ ကိုပင်ဟေဂင်၊ ဘာလင်၊ မော်စကို၊ ပရာဟာ့ စသည့် ခရီးလမ်းဆုံးမတူသည့် မြို့များကို မမှားအောင် ကိုယ်နှင့်သက်ဆိုင်သည့်တွဲကို တက်ကာ အိပ်စက်လိုက်ပါလာခဲ့ပါတော့သည်။ ။
(ခရီးစဉ်အတွင်းကူညီပေးခဲ့သောသူများအားလုံးအား ကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါသည်။ ဤပို့စ်ကို ဘလော့ဂ်၏ ဆိုဒ်ဘား တွင်တင်ထားသည့် `အမ်စတာဒမ်၊ သည်ဟိဂ်နှင့် မီးအိမ်နီရပ်ကွက်´ ဓါတ်ပုံအယ်လ်ဘမ်နှင့်အတူ ဖတ်ရှုပါက ပိုအဆင်ပြေပါလိမ့်မည်။)
Posted by Thet Oo at 9:13 AM
very nice to read about your trip. wondering you and your host (hollander Ko myat thiha) did some window shopping in the red light district:p I hope you really enjoy your stay here in holland. I missed the chance showing you around. welcome again to Holland. TTAA
(၂) ဒီမိုကရေစီအစိုးရနှင့် သတင်းစာများ (ကြေးမုံဦးေ...
(၁) အမွန်အစပေါ်ဦးစ မြန်မာသတင်းစာများ (ကြေးမုံဦးသေ...